Archive du 20200909
Tale Jeneralin’ny JIRAMA Tratry ny ampamoaka goavana…
Niparitaka tao amin’ny tambajotran-tserasera nanomboka ny alatsinainy teo ny karazana ampamoaka miampanga sy mamelively ny Tale Jeneralin’ny Jirama Atoa Vonjy Andriamanga.
Minisitry ny vola Namaly an-kolaka ny orinasa AAA
“Izay tsy manara-dalàna, dia tsy maintsy manara-dalàna aloha. Tsy ianao tsy manara-dalàna indray no hanome lesona ny fanjakana. Rehefa tsy manara-dalàna ianao dia aorianao ny fanjakana.
Mifoha ny CENI Amin’ny 11 desambra ny fifidianana Loholona
Ao anatin’ny fandrafetana ny lisi-pifidianana ho an’ireo mpifiidy vaventy (ben’ny tanàna sy mpanolontsaina) ny Vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana amin’izao fotoana izao.
Fanambaram-pananana Depiote miisa 51 tsy nanatanteraka ny azy
Solombavambahoaka miisa 100 amin’ireo 151 mandrafitra ny Antenimieram-pirenena no nanao fanambaram-pananana teny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalampanorenana, raha ny hita ao amin’ny firaketan’ity andrimpanjakana ity. Ny andininy faha-41
Dosie eny amin` ny HCJ Miandry ny fivoriana ara-potoanan` ny parlemanta
Efa tafiakatra 15 ireo dosie voarain` ny Fitsarana avo (HCJ) izay mitsara ireo manampahefana ambony.
Fifidianana loholona Iza avy moa izany ireo mpifidy vaventy ?
Hifarana amin` ny volana febroary 2021 ny fe-potoam-piasan` ireo loholon` i Madagasikara.
Fitakiana ny nosy Malagasy Hirodorodo eny Anosikely ny Otrikafo anio
Hanatitra taratasy fangatahana eny anivon’ny antenimierandoholona Anosikely ny antoko politika Otrikafo sy ireo mpiaradia aminy amin’ity anio ity.
Fita, fotteranaodrafitrasa … Nanome 36 tapitrisa euros ny Eoropeanina
ita sonia ny fifanarahana hoenti-manatanteraka programa roa vatsian’ny VoVndrona Eoropeanina vola mitentina 36 tapitrisa euros ho an’i Madagasikara, ka nisolontena ny Firenena Malagasy ny Minisitry ny toekarena sy ny vola Atoa Richard Randriamandranto.
Kolikoly momba ny fitrandrahana ala Mandray fitoriana ny minisiteran’ny tontolo iainana
Manasa ny olom-pirenena ny eo anivon’ny minisiteran’ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy ankehitriny mba hitory eny anivon’ity minisitera ity raha misy olona mampanantena vola be hahazoana mitrandraka ala sy mamoaka hazo sarobidy na manao kolikoly momba izany.
Parc A dasibe - Mantadia Isan’na mahy tenaliana ny Italianina
Manomboka misokatra ireo toeram-pizahantany manerana ny Nosy. Tsy andrin’ireo mpizahatany teratany Italianina efa teto Madagasikara hatramin’ny volana marts any nisokafan’ny valanjavaboaharin’Andasibe-Mantadia.
Mahajanga Vonona handray ireo mpitsidika
Miomana amin’ny fiverenana amin’ny fiainana andavanandro ny any Mahajanga amin’izao fotoana izao.
Toetry ny andro Mila miomana dieny izao hiatrika ny fahavaratra
Rehefa fotoam-pahavaratra dia miakatra ny loto izay entin` ny riaka ary mitsikafona eny an-dalambe rehetra eny na manaraka lakan-drano na lalany ka mivarina any amin` ny toerana iva.
JIRAMA Toamasina Tratra ireo 5 lahy nangalatra
Dimy lahy no tra-tehaka nangalatra vy tao an-tokontanin'ny JIRAMA, Verrerie ao Toamasina, omaly maraina.
TAXIBE Maro sahady ireo tsy mampiasa « gel »
Na dia vao tapa-bolana aza izay no fotoana niverenan’ny taxi be niasa soaman-tsara dia efa marobe sahady ireo tsy mampiasa ny gel désinfectant, ranom-panafody famonoana bibikely sy mikraoba ahosotra amin’ny tanana.
Fitaterana an-dranomasina Vahaolana iray hanavotana ny toekarena
Manana anjara toerana lehibe i Madagasikara eo amin` ny lafin`ny fifanakalozana an-dranomasina satria andalovan` ny “routes maritimes internationales” lehibe telo, mampifandray amin` ny kaontinanta dimy.
Tobim-piantsonana MAKI Efa mipetraka ny fandaminana momba ny zotra RN1 sy RN4
Hisokatra manomboka amin’ny zoma sy sabotsy ho avy izao ny lalam-pirenena fahaefatra sy fahaenina ary voalohany mifandray amin’ny Faritra Analamanga.
Lalana arrêt 30 miazo ny Vatobe Tapaka nanomboko omaly noho ny fanamboarana
Taorian’ny fanambarana nataon’ny kaominina Antananarivo renivohitra mikasika ny asa fanamboaran-dalana tsy maintsy hiantsorohan’izy ireo mialohan’ny fotoam-pahavaratra dia fantatra fa nanomboka, omaly, izany.
Fiara WW sy mitondra laharana vahiny Mitohy ny hetsika ho fampanarahan-dalàna
Manentana hatrany ireo tompona fiara sy mpampiasa fiara manana laharana WWT na ireo laharana vahiny ny foibe fitsarana fiarakodia fa efa betsaka ireo tonga manatona sy nitondra ny fiarany atao fandraisana ara teknika ny foibe fitsarana fiarakodia (DGSR).
Araben’Antananarivo Feno lavaka miandry fanamboarana
Tsy hoe lavaka vokatry ny fahapotehan-dalana tsy nisy fikarakarana fa tena lavaka voafaritra natao ho arenina mihitsy no tsikaritra ho feno amin’ireo arabe sasantsasany eto Antananarivo ankehitriny.
Fidiran’ny mpianatra Hisy fitsirahana atao amin’ireo sekoly tsy miankina
Taorian’ny kabarin’ny Filoham-pirenena tamin’ny alahady alina lasa teo mikasika ny fanapahan-kevitra malalaka azon’ny sekoly tsy miankina raisina mikasika ny fidiran’ny taom-pianarana 2020-2021
Betafo Vakinankaratra Nohamafisina ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana
Sesilany ny fitarainan’ny vahoaka ao Betafo Vakinankaratra manoloana ny firongatry ny tsy fandriampahalemana ao an-tanàna sy amin’ireo Fokontany manodidina.
Vahoaka Malagasy Efa an-tsoso-koditra ny fahasahiranana
Sahirana ny 99,9%n’ny malagasy, hoy ry zareo avy eo anivon’ny rodoben’ny mpanohitra izay rehefa mandinika ny raharaham-pirenena eto Madagasikara vokatry ny fanakatonana ireo seha-pihariana samihafa teto Madagasikara hampanarahana ny fepetra ara-pahasalamana.
Kaominin’Ivato Hahazo fiofanana maimaimpoana ireo very asa
Nisy ny fifanaraham-piaraha-miasa teo anivon’ny kaominin’Ivato sy ny INPF na ny sampam-pampianarana ambony Malagasy momba ny fampiroboroboana ny asa omaly.
Miakatra indray ny isa 83 ny tranga vaovao , 4 matin’ny Covid 19
Olona 4 indray no namoy ny ainy vokatry ny coronavirus, ka nampiakatra ny isan’ny lavo hatramin’izay ho 206, araka ny tatitry ny Pr Vololontiana Hanta omaly.
Fisokafan’ny lalana ao Matsiatra ambony Hifampidinika amin’ny governora ireo mpitatitra
Hisy ny fivoriana iarahan’ny governoran’ny faritr’i Matsiatra ambony amin’ireo mpitatitra ao amin’ity faritra ity anio 9 septambra 2020.